Umatshini we-laser wefibre
Umatshini we-laser we-CO2
CO2 Umatshini wokusika kunye ne-engraving Machine
Umatshini wokusika i-Metal-Non Metal CO2 Laser
Umatshini wokuphawula i-Laser
Uyikhetha njani i-CNC Router Machine Spindle?
1. Umatshini wokukrola wentengiso: into yokukrola yinto ethambileyo, ke amandla okuluka komatshini wokukrola wentengiso angaphakathi kwe-1.5kw-3.0kw. Ukuba ukhetha ngale ndlela, unokufezekisa injongo yokukrola kunye nokugcina iindleko. 2. Umatshini wokukrola womthi: Ujikeleziso ...Funda ngaphezulu »
Ukuchaneka usebenzisa indlela yomatshini wokukrola ilitye
(1) Indawo yokusebenzela Umatshini wokukrola ilitye sisixhobo se-mechatronics esinee-high-tech, esineemfuno ezithile kwimeko yokusebenza. ...Funda ngaphezulu »
Indlela Ukukhetha Stone CNC umzila Machine iincakuba? Isikhokelo kubasebenzisi beZixhobo zoMatshini wokuKrola iLitye
Amatye e-CNC CNC oomatshini besikhokelo somsebenzisi: 1. Ukusika i-acrylic ukusika komatshini wokukrola ngamatye, kuyacetyiswa ukusika umatshini osika macala. Iphawulwa ngokuqhubekisa okungenamsi kunye nokungabi nasongo, isantya esikhawulezayo, ukusebenza ngokukuko, ukungabinamatheko, ulunge ngokwendalo, kunye nesantya sayo ...Funda ngaphezulu »
Ukulwa, siya kuphumelela!
Ixesha lokuposa: Mar-03-2020
Ukuqala ngoJanuwari ngo-2020, isifo esosulelayo esibizwa ngokuba yi “Novel Coronavirus infectionak Pneumonia” senzeke eWuhan, China. Le bhubhani ichukumise iintliziyo zabantu kwihlabathi liphela, ebusweni ubhubhane, abantu baseTshayina behla benyuka nezwe lonke, bayasebenza ngenkuthalo ...Funda ngaphezulu »
Nge-27 kaJulayi ngo-2019, abathengi baseNdiya beza kumzi-mveliso
Ixesha lokuposa: Jul-30-2019
Nge-27 kaJulayi ngo-2019, lusuku olushushu apha eJinan China, Abathengi baseIndiya beza kutyelela umzi-mveliso wethu, bayanamkela nonke bahlobo bethu. Abahlobo baseIndiya bandwendwela isebe lemveliso yethu yomatshini we-CNC malunga neeyure ezintathu, emva koko bandwendwela isebe lethu lemveliso ye-laser ye-laser efaka umatshini emva kohambo ...Funda ngaphezulu »
Yintoni umatshini wokuhambisa i-CNC?
Ixesha lokuposa: Meyi-28-2019
I-CNC ROUTER Umatshini olawula ikhompyutha olawula ukubala (CNC) ngumatshini wokubhala olawulwa yikhompyuter kunye nomatshini wokusika onxulumene nomatshini ophethwe ngesandla osetyenziselwa ukusika izixhobo ezahlukeneyo ezilukhuni, ezinjengomthi, umxube, ialuminium, intsimbi, iiplasitiki, iglasi kunye namagwele.  Iikhowudi ze-CNC zinokwenza imisebenzi emininzi ...Funda ngaphezulu »
Ixesha lokuposa: Meyi-21 ukuya ku-2019
Shandong DADI CNC Equipment Co, Ltd yasekwa ngonyaka ka-2014. Ngumenzi oqeqeshiweyo we-CNC ROUTER kunye nomatshini we-CNC LASER.Izixhobo zisetyenziswa ngokubanzi: kumzi-mveliso wentengiso, ishishini lomsebenzi wamaplanga, ushishino lwamatye, ifenitshala yefanitshala, imveliso yokuhombisa eludongeni kunye nezinye ind ...Funda ngaphezulu »
Nikelani ingqalelo nokuthengwa laser umatshini ukusika
ixesha Post: Aug-03-2018
Ukusetyenziswa jikelele lwe laser umatshini ukusika izise lula ukuba ishishini elihambisayo metal le. Ukuba nangoku balukuhlwe eninzi koomatshini laser ukusika, ungasihlawula ingqalelo kwezi ngongoma. 1. ukusika umgangatho laser ukusika: njengabathile kitchenware, iimoto, oomatshini, hardware kunye nezinye ...Funda ngaphezulu »
Loluphi uhlobo yomhombiso ikhaya laser ukusika umatshini qamba?
Inkqubo laser nangokukrola ayikho nje "imela" ebukhali kushishino lokuvelisa, kodwa loo miliza nobugcisa ukuba sibona kuyo yonke indawo ebomini bethu bemihla ngemihla ayikwazi lwahlulwe laser mfanekiso. Makhe sijonge ukuba uhlobo impahla yosapho singakwazi ukwakha. Ukusetyenziswa kwe laser ...Funda ngaphezulu »
Nesisombululo laser amafu ehlotyeni
Ngeli xesha, oko ngexesha kwexesha meng xia, xa umbane weendudumo indlela kwandisa, imvula rhoqo kunye nendawo emanzi ngokulula kukhokelela amafu kwi-laser, oko ke kusehlisa ukusebenza laser kwaye nokuba yonakele. Indlela yokusombulula le ngxaki yokusetyenziswa laser amafu? Yintoni s ...Funda ngaphezulu »
Idilesi: Igumbi 1102, North Rongsheng Times International Building 6, Quanfu Overpass, Licheng District, Jinan isixeko, iphondo lase ShanDong, China
Inombolo yomnxeba: +86 15688488223
I-DADI CNC: Molo, Wamkelekile kwiwebhusayithi yethu.
I-DADI CNC: Ndingakunceda?